သာလွန်ဇောင်းထက်| February 18, 2013 | Hits:20,296
25 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ရာဇာ February 18, 2013 - 7:51 pm	အရေးယူမဲ့ အဖွဲ့ထဲ မှာ ဦးအောင်မင်း များပါသေးလား ? တော်ကြာ အိမ်ဝင်မစစ်ခင် အိမ်ဝက ဦးချပြီး မှဝင်စစ်ပါ ဖြစ်နေအုံးမယ်….
Reply	sai hla kyaw February 24, 2013 - 3:22 pm	orgအဲဒီကိစ္စလွယ်ပorgအဲဒီကိစ္စလွယ်ပမလားတရုတ်ကဉာန်များ:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Reply	ဌေးဝင်း March 29, 2013 - 8:35 pm	လုပ်မနေပါနဲ့…လူကြားကောင်းအောင်….၀န်ကြီးကအစ….လ၀ကဒရိုင်ဘာအထိ..အားလုံးဗိုက်ပါတဲ့လူချည်ဘဲ။သဘောပေါက်ပါတယ်နော်…ရှင်းမပြတော့ဘူး။